Indawo entle ezolileyo entliziyweni yeBroughty Ferry
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguHamish
Indawo ezolileyo, epholileyo, etofotofo kwaye ebekwe kakuhle kwigumbi elinye elikumgangatho ophantsi entliziyweni yeBroughty Ferry. Iflethi ihonjiswe ngobumnandi kwaye ifakwe yonke indawo kwaye ibandakanya ishawa / igumbi lokuhlambela langoku kunye nekhitshi elilungiselelwe ngokupheleleyo. Igumbi lokuphumla libandakanya itafile yokutyela, iTV kunye nebhedi ekhethiweyo yesofa. Ngaphandle kukho igadi yabucala enebhentshi yepikiniki ejonge kwiyadi yegadi ehlala igcinwe kakuhle. Iibhayisikili zendoda kunye namanenekazi ziyafumaneka ukuze zisetyenziswe ziindwendwe.
Ipropathi ihonjiswe ngokumnandi ngomxube wemizobo kunye nefenitshala. Ifenitshala ineziqwenga eziqokelelweyo ngokuhambelana nesitayile semveli kodwa ngokufanelekileyo ikhatshwa ziziqwenga zale mihla. Igumbi lokuhlambela kunye nekhitshi zisanda kuphuculwa. Ngaphandle kukho igadi egcinwe kakuhle kubandakanya ibhentshi yepikiniki kwaye yenza ulwandiso olonwabisayo kwipropathi.
I-Broughty Ferry ibonelela ngoluhlu lwezinto ezibalaseleyo kuzo zonke phakathi kohambo olufutshane ukusuka kwiflethi. Ezi ziquka iicafe, iindawo zokutyela, iiparlors ze-ayisikrimu, iibhari kunye ne-t ezizimeleyo kunye neendawo eziphakamileyo zesitrato kunye neevenkile. Oku kubandakanya iTesco's, M&S Foodhall kunye neebhutsi. Eyona nto inomdla kakhulu lunxweme olukufuphi, inqaba kunye ne-waterfront.
Umbuki zindwendwe ngu- Hamish
Iindwendwe zinokunditsalela nanini na ngeapp ka-Airbnb okanye ngokuthe ngqo ngeselfowuni. Ndiya kuhlala ndizama ukuphendula ngexesha elifanelekileyo.